Olee otú igwe ojii na-etolite | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú igwe ojii na-etolite
na igwe ojii Ha apughi ibu nani isi iyi nke mkpali nke ide, gini mere, uri ma obu akuko. Ọ bụ ezie na anaghị ahụkarị ha nke ọma, ọkachasị n'oge ọkọchị mgbe ihe ịchọrọ bụ ịnụ ụtọ anwụ, nke bụ eziokwu bụ na ewezuga ha ndụ na mbara ụwa anyị agaraghị apụta, n'ihi na ibi ndụ, dịka anyị maara , mmiri dị mkpa.
Ma, You nwetụla mgbe ị na-eche otú igwe ojii na-etolite? Ọ bụrụ otu a, nọgidenụ na-agụ ma anyị ga-akọwara gị ya.
1 Igwe ojii
2 Clouddị ojii
Sgwé ojii na-etolite mgbe ikuku na-ebili warmed site na irradiation nke ala. Ka ọ na-ekpokwu ọkụ, ikuku na-akwụgo ma na-arịgo ruo mgbe ọ ruru ebe igirigi ya, nke ga-abụ mgbe alụlụ mmiri na-abanye obere mmiri ma ọ bụ kristal ice. Mkpụrụ mmiri ndị a, nke nwere ọdịdị okirikiri ma tụọ n'etiti 0,004 na 0,1mm, na-aga n'ihu na-aga n'ihu ka a na-akwụsịtụ ha na ikuku ma na-eme ka ọ na-aga elu, yabụ ha na-adaba na ibe ha na otu. Dabere na ọnọdụ ikuku, ịba ụba nke ọkpụrụkpụ ha nwere ike ime n'ụzọ na-eme ka ha nwee nsogbu.
Igwe ikuku na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịme igwe ojii, ebe ọ bụ na, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na e kere ha n'etiti ikuku ma ọ bụ ikuku na mmelite siri ike ha ga-enwe mmepe kwụ ọtọ, ebe ọ bụrụ na e kere ha na ikuku na-ezu ike, ha ga-apụta n'ígwé ma ọ bụ strata. Yabụ, ụdị igwe ojii atọ dị iche: nke dị elu, ọkara na obere:
Elu: na-enwekarị nnụnụ nku nku. Ha na-etolite na elu n'etiti 7 na 13 km, na anaghị ebute, kama ha nwere ike ịbụ akara mgbanwe na oge. Mkpụrụ ndụ anyị hụrụ ebe a bụ Cirrus, Cirrocumulus na Cirrostratus.
Midia: bụ ndị na-ekpuchi elu igwe ma ọ bụ na-ezughị ezu, na ọdịdị ọdịdị ma ọ bụ nke edo. Ha na-etolite na elu n'etiti 3 na 6 kilomita, ma ghara ibutu. Mkpụrụ ndụ anyị hụrụ ebe a bụ Altocumulus na Alstrostratus.
Ala: ha nwere ọdịdị nke owu, ọ nwere ike ịkpali ma ọ bụrụ na ha dị ala ma nwee nnukwu mmepe. E guzobere ha na elu dị n'okpuru 3km. Mkpụrụ ndụ anyị hụrụ ebe a bụ Stratus, Cumulus, Cumulonimbus.
Igwe ojii na-adọrọ mmasị, ị naghị eche? 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Olee otú igwe ojii na-etolite
fabulous na haunting
Ọ dị oke mma mana ọ ga-amasị m ka wikipedia dịrị na bekee
Zaghachi Deysi Domínguez
Ndị ọkachamara na-atụ ụjọ site na ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ na Antarctica